MADAAFIIC KU DHACDAY XARUNTA MADAXTOOYADA SOOMAALIYA
Goordhow waxaa magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ku soo dhacday tiro madaafiic ah.
Ilaa 3 madfac oo ah qoriga loo yaqaano hoobiyaha ayaa ku dhacday xarunta madaxtooyada Soomaaliya.
Madfaca 1-aad ayaa waxaa uu ku dhacay dabaqa sare ee xafiiska madaxweynaha Soomaaliya.
Madfaca 2-aad ayaa waxaa uu ku dhacay xarunta guddiyada Baarlamaanka ay ku shaqeeyaan ee la yiraahdo Villa Hargeysa oo madaxtooyada ku dhex taala.
Ugu dambeeyntii madfaca 3-aad ayaa waxaa uu ku dhacay xafiis ay guddiga doorashooyinka ku leeyihiin madaxtooyada Soomaaliya.
Lama oga khasaaraha ka dhashay madaafiicdaasi iyo waliba halka laga soo tuuray midna.
Al-Shabaab ayaa madaafiic iyo qaraxyo ku weerartay xarumaha dowlada ee Muqdisho.
RW KHEYRE OO SHEEGAY INAY KA JAWAAB BIXINAYAAN QARAXYADII AYGEESTEEN ALSHABAAB
Kheyre ayaa u mahad celiyey Ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliyeed ee bad baadiyey dadkii guryagooda ku qabsatay dagaalada iyo qaraxyada.
Mudane Xasan Cali Khayre waxa uu sidoo kale u mahad celiyey dhaqaatiirta iyo kalkaaliyeyaasha badbaadiyey dhaawacyada, sidoo kalena waxa uu u mahad celiyey dadka Soomaaliyeed ee dhiiga ugu deeqay walaalahood dhibaatadu soo gaartay.
Dhinaca kale Ra’isilwasaare Kheyre aayaa ku hanjabay in ay ka aargudan doonaan Al-Shabaab oo ay jawaab deg deg ah ka bixin doonaan qaraxyadii ay Al-Shabaan ka geeysteen Muqdisho.
Ciidamada dowlada Soomaaliya ayaa isku diyaarinaya howgal culus oo Al-Shabaab looga saarayo goobaha ay kaga suganyihiin Soomaaliya.
MADAXWAYNAHA DALKA SUUDAAN OO TACSI U DIRAY DADKII KU WAXYEELOOBAY QARAXII MUQDISHO
Madaxweynaha Dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir oo khadka taleefana kula soo xiriiray Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku shahiiday weerarka argagixisanimo ee ka dhacay magaalada Muqdisho.
BURBUR IYO KHASAARE BAAXAD LEH OO KA DHASHAY QARAXYADII MUQDISHO
Iyada oo ciidamada dowlada Soomaaliya ay sooweerarkii khasaaraha badan geystay ee xalay ka dhacay Muqdisho ayaa waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi.
Marka laga soo taga khasaaraha nafeed oo ay geysteen qaraxyadaasi waxaa jiro khasaare maaleed.
Waxaa guud ahaan burburay xarumo ganacsi iyo guryo ay dagaanaayeen dad rayid ahaa.
Kooxdii weerarka soo qaaday ee Al-shabaab ayaa ka dhex dagaalamayay guryo ay dagaanaayeen dad shacab ahaa.
Ciidamada amaanka dowlada Soomaaliya gaar ahaan kuwo qaba tababarka sare ee loo yaqaano Alfa Guruub ayaa si xeeladeeysan u fuulay guryaha ay ku jireen Al-shabaab.
Waxaa guud ahaan burburay xarumihii weerarku uu ka dhacay.
Waxaa burburay Hotelada Maka Al-Mukarama, Hilaac UK, Kuwait Plaza iyo guryo ku yaalla hareeraha laamiga Makah Al Mukaramah.
Soo afjarida weerarkaasi ayaa waxa uu qaatay waqti aad u farabadan oo ka badan Labaatan saacadood.
Laamaha amaanka dowlada Soomaaliya ayaa toogtay kooxihii weerarkaasi soo qaaday.
MADAXWEYNAHA PUNTLAND OO KA TACSIYAY GEERIDA XILDHIBAAN MIRE
28th February 2019 by A.lahi Leave a Comment
Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka tacsiyeeyay geerida xildhibaan Maxamed Faarax Mire oo ku dhintay shil gaadhi oo caawo ka dhacay laamiga u dhexeeya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari iyo degmada Waaciye ee gobolka Karkaar.
Qoraal tacsi ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in madaxweynaha oo ku hadlaya afka gollayaasha dowladda uu si gaadha ugu tacsiyeynayo eheladii qaraabadii uu ka baxay marxuumka.
Sidoo kale madaxweynaha ayaa marxuumka ugu duceeyay in Ilaahay ka waraabiyo janna Fardowsa uuna deriskiisa ka yeelo suubbanihii Rasuulka SCW
XILDHIBAAN KA TIRSAN PUNTLAND OO SHIL KU DHINTAY
Wararka hadda soo gaaray Warbaahinaha ayaa sheegaya in goor dhoweyd uu shil gaadhi ku dhintay mudane ka tirsan Golaha wakiilada dowladda Puntland.
Xildhibaan Maxamed Faarax Mire oo laga soo doorto gobolka Bari ayaa ku dhintay shil uu ku galay inta u dhexaysa magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari iyo degmada Waaciye ee gobolka Karkaar sida ay sheegeen goobjoogayal.
Wararku waxay sheegayaan in Gaadhiga xildhibaanka uu dusha ka maray gaadhi xamuul ah oo u socday dhinaca magaalada Boosaaso xarunta ganacsiga Puntland.
CIIDAMADA JUBALAND OO SOO QABTAY BADEECOOYIN DHACAY
Ciidamada Sirdoonka Jubaland oo Gacanta ku soo dhigay Badeecooyin dhacay.
Wararka ka imaanaya Gobalka Gedo ayaa sheegaya in Ciidamada Amniga Maamulka jubaland ay gacanta ku soo dhigeen badeecooyin la sheegay in waqtigooda ay dhamaadeen.
Badeecooyinkan dhacay oo ay ku jiraan daawooyin Dhacay ayaa waxay saarnaayeen Gaadiid Nooca Xamuulka ah waxaana la doonayay in si dhumaaleysi loogu iibiyo Gudaha Gobalkaasi.
Saraak8isha Ciidamada Nabad Sugida Jubaland ayaa sheegay in warbaahinta ay usoo bandhigi doonaan Gawaaridan halka ay ka yimaadeen iyo goobaha la damacsanaa in si dhumaeysi ah loogu iibgeeyo degaanada Gobalkaasi Gedo.